एभिन्युज टेलिभिजनअस्पताल जानुपर्नेमा चिन्तित हुनुहुन्छ, चिन्ता नलिनुस् घरमै आउछन् अब डाक्टर - एभिन्युज टेलिभिजन
6 Kartik 2075 Tuesday 7:04 am प्रतिकृया दिनुहोस
काठमाडौं : विरामी भएर अस्पताल जान चिन्तित हुनुहुन्छ । बुढेसकाल लागेपछि घरमा भित्रवाहिर गर्न पनि मुस्किल पर्छ भने अझ हरेक हप्ताको दुई दिन औषधीउपचार गराउन अस्पताल धाउनुपर्नेछ भनेर झनै चिन्तित हुनुभएको होला । बिरामीलाई अस्पताल आउजाउ गर्दाको सास्ती, लिएर जाने व्यक्तिको समय र आउँदाजाँदा लाग्ने खर्चको मूल्य हिसाब गरौँ त ! बिरामीलाई असुविधा त छँदैछ, स्वास्थ्यमा समेत जोखिम छ ।
तर अब तपाई काठमाण्डौमा हुनुहुन्छ भने अब यसरी सास्ती खेप्दै विरामी आमाबाबु लिएर अस्पताल धाइरहनु पर्दैन । एक कल फोन गर्नुस् बस् । अनि डाक्टर या नर्स तपाईको घरमै आइपुग्छन् । बिरामीको घरघरमै स्वास्थ्य सुविधा पु¥याउने काममा तल्लीन छ पुरानो बानेश्वरमा रहेको हेल्थ एट होम ।
अस्पतालको जस्तै उपचारको सेवा बिरामीलाई घरघरमै गएर दिने उद्देश्यले हेल्थ एट होमको स्थापना गरेको बताउँछन् यसका संस्थापक डा. बिशाल ढकाल । पाकिस्तानमा सर्जरी पढिरहेका डा. विशाल स्वदेश फर्किएपछि के गर्ने भनेर योजना बनाएरहेका थिए । एक दिन उनले बुढेसकालमा सकीनसकी अस्पताल धाइरहेका बिरामीहरुको दृश्य सम्झिए ।
अनि देखे, बिरामी अस्पताल जाने होइन, डाक्टर र नर्सहरु नै बिरामीका घरघरमा गएर उपचार सेवा दिने अस्पतालको सपना । डा. ढकालको दिमागमा त्यसबेला रोपिएको त्यही सपनाको साकार रुप हो अहिलेको हेल्थ एट होम ।
शुरुका दिनहरुमा हेल्थ एट होमको सेवा त्यत्ति चलेको थिएन । आफ्नो सपनाको मलजल गर्दै आठ वर्ष बिताउँदा डा. बिशालले अहिले यसलाई एक सय भन्दा बढी डाक्टर र नर्सहरुको साझा चौतारी बनाइसकेका छन् । ती डाक्टर र नर्सहरु बिरामीको आवश्यकता अनुसार उपचार सेवा दिन घरघरमा पुग्छन् । तीन जना डाक्टर त उनीकहाँ चौबीसै घण्टा खटिइरहेका छन् । हेल्थ एट होमबाट नियमित स्वास्थ्य सेवा लिने बिरामीको संख्या पाँच सय नाघिसकेको छ ।
हेल्थ एट होमले बिरामीको उपचार गर्ने डाक्टर र नर्सहरु मात्र घरघरमा पठाउँदैन, ल्याब सेवा, फिजियोथेरापी र एल्डरली केयर अर्थात् बुढेसकालमा चाहिने हेरचाह पनि थलोमै पुगेर दिदै आएको छ । यस्ता सेवा दिएवापत् होमले बिरामीबाट एक हजार पाँच सय रुपैयाँदेखि माथि शुल्क लिने गरेको छ । यो शुल्क बिरामीहरुले अस्पताल धाएर तिर्नेपर्ने भन्दा बढी नभएको यसका सञ्चालक डा. विशाल बताउँछन् ।
पुरानो बानेश्वरको पुरानो घरको एउटा कोठाबाट शुरु भएको हेल्थ एट होमको सेवा विस्तार भएर अहिले नयाँ बानेश्वर र बाँसबारीका शाखाहरुबाट समेत संचालन गरेका छन् ।